Blackout MagicalTex Vagadziri & Vatengesi - China Blackout MagicalTex Fekitori
China Mutengesi Wholesale Roller Blind Fabric
MagicalTex Indoor Window Blinds Blackout Mucheka WeHofisi iri mune yakanaka mhando. Iyo yakasimba, isina chakuvhuvhu uye isina chipfukuto. Yakagamuchirwa nemicheka inoshamwaridzika zvakatipoteredza, isina-chepfu uye isinganetsi iyo inoita nharaunda yakasununguka kwauri. Iyo inokodzera French Window. Tine akawanda marudzi eakara mavara kwesarudzo yako. Chinhu chimwe nechimwe chine chitarisiko chakanaka, chakanaka, chine rupo uye chinoshamisira. Machira edu haana mvura uye kudzivirira moto.
MagicalTex Yakakwira Hunhu Gunny Blind Fabric Kudzima magetsi kwakakurumbira pakati pevatengi vedu. Tine kukwikwidzana logistics. Nechinangwa chepamusoro uye kugona kwakanyanya, isu tinopa kukurumidza kuendesa kwauri. Uye zviri nyore kuti iwe uise iyo. Unogona kuva nenzira dzakasiyana dzekumisikidza, senge Kuisa Ceiling, Kunze Kuisa, Kuisa Kwekunze zvichingodaro. Tinogona kukupa mahara emahara kuti utarise mhando uye ruvara.
Chinese Mutengesi Roller Anopofumadza Mucheka Kudzima magetsi
MagicalTex Blackout Roller Blind Fabric ndeimwe yezvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa pakati pevatengi vedu. Iyo haina mvura uye kudzivirira moto. Yakanaka mhando polyester zvinhu zvinogona kuita kuti igare, hapana chakuvhuvhu, hapana chipfukuto, hapana deformation, hapana track mushure menguva refu-nguva kushandiswa. Chinhu chimwe nechimwe chine chitarisiko chakanaka, chakanaka, chine rupo uye chinoshamisira. Unogona kuva nenzira dzakasiyana dzekumisikidza, senge Kuisa Ceiling, Kunze Kuisa, Kuisa Kwekunze zvichingodaro. Zviri nyore kuti iwe uise iyo.
Jira redu harina humbowo hwemafuta uye harina mvura, zviri nyore kuchenesa, kuoma kana yangokwizwa Uye ine kugona kwakanaka mune shading uye ine yakanaka yekufefetisa mhedzisiro. Yakasimba simba polyester machira anoita emicheka yedu 'simba yakapetwa ka4 kupfuura nylon uye kakapetwa makumi maviri pane viscose; Kusimba kwakanaka kunoita kuti zvigadzirwa zvedu zvive zvakasimba, zvinogara, kuunyana kuunyana. Uye, jira redu repolyester rine yakanyanya kupisa kupisa uye kudziya kwemafuta. Tinogona kupa emahara sampuli kwauri!
Fekitori Yakananga Roller Blind Fabric Kudzima magetsi
MagicalTex Roller Blind Mucheka wakagadzirwa nepolyester, isu tine mhando dzakasiyana dzemicheka yesarudzo yako. Zvigadzirwa zvedu zvinokodzera misika yakasiyana. Zvese zvigadzirwa zvedu zviri mune yemhando yepamusoro uye zvinogona kukubatsira iwe kuhwina moyo wevatengi vako. Jira redu harina humbowo hwemafuta uye harina mvura, zviri nyore kuchenesa, kuoma kana yangokwizwa Uye ine kugona kwakanaka mune shading uye ine yakanaka yekufefetisa mhedzisiro.
Tine nyanzvi R & D nzvimbo yekugadzira zvigadzirwa zvitsva. Zvigadzirwa zvedu zvakakwana unogona kuwana zvigadzirwa zvako zvakanaka kubva kukatalog yedu. nemhando dzakasiyana siyana, masitayera enoverengeka, mafashoni maitiro, akasiyana masitaera. Isu tiri vagadziri, tinotengesa zvinhu kune vatengi vedu zvakananga, zvinogona kukubatsira nekusiya mari yepakati. Tinotenda isu tinogona kuve mutengesi wako akanaka. Tinogona kupa emahara sampuli kwauri!
Yakakurumbira Roller Shutter kudzima magetsi Micheka 320g
MagicalTex Roller Shutter Blackout Mucheka wakagadzirwa ne polyester ine yakakwikwidza mhando. Yakanaka uye fashoni. Iine mbiri kumeso kunyorera nzira, zvigadzirwa zvedu zvine semi kudzima magetsi. Iine advanced ultrasonic yekucheka tekinoroji, inoita kuti iite burr kumucheto, yakanakisa kwazvo. Zvese zvigadzirwa zvedu zviri mune yakanaka mhando uye inonzwisisika mutengo.
Mapofu edu ari mune ruzha rwakaderera, zvinogona kuita kuti imba yako nehofisi zvive zvakanyarara, zvinopa nzvimbo iri nani yakanyarara kwauri. Tine MOQ diki, isu tine stock yezvizhinji zvezvigadzirwa zvedu, tinogona kuronga kutumirwa kwauri munguva pfupi. Kuti uratidze moyo yedu kwauri, tinogona kukupa mahara emahara kuti iwe utarise mhando uye neruvara.
Sunshade inopofumadza Linen Micheka Kudzima magetsi Polyester
MagicalTex Blackout Jira rakagadzirwa nepolyester, uye chimwe chedu zvigadzirwa zvinozivikanwa. Tinogona kupa 200/230/250/300 hupamhi hwakasiyana kuti iwe usarudze. Kurema kwejira redu ndeye 310gsm pamita imwe, uye isu tinogona kuita yakaenzana upamhi. Iine advanced ultrasonic yekucheka tekinoroji, inoita kuti iite burr kumucheto, yakanakisa kwazvo. Tine akasiyana akasiyana mavara ako sarudzo, unogona kusarudza chero imwe. Iyo yakakodzera kwazvo chikoro, imba uye hofisi kushandiswa.
Zvigadzirwa zvedu zviri mumhando yakanaka uye nemutengo unonzwisisika. Ivo vanogadzikana kwazvo, hupenyu hwavo hunogona kuve makore gumi. Tine yakaderera MOQ iwe. Saka, kunyangwe hazvo huwandu hwako hwakakura kana hudiki, tinogona kuita bhizinesi newe Nehunhu hwakanaka uye sevhisi yepamusoro, isu tiri mukurumbira pakati pevatengi vedu. Tinopa maawa makumi maviri nemana ekushandira vatengi vedu kuti vakutsigire. Uye nekuda kwekushandira pamwe kwedu kwekutanga, tinogona kukupa mahara emahara.
MagicalTex Window Curtain Fabric 100% Polyester inogadzirwa ne polyester. Kupupa furo kupenda kunoita kuti isangoita semi kudzima magetsi, asi zvakare ine chitarisiko chakanaka. Tine akasiyana mavara uye akasiyana hupamhi hwesarudzo yako. Uye isu tinogona kuita OEM bhizinesi. Jira redu harina humbowo hwemafuta uye harina mvura, zviri nyore kuchenesa, kuoma kana yangokwizwa Uye ine kugona kwakanaka mune shading uye ine yakanaka yekufefetisa mhedzisiro.
Zvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa kwazvo pakati pevatengi vedu. Isu tinopa makore gumi garandi kune edu ese machira. Tine MOQ diki, kana odha yako iri hombe, isu tinoronga zvigadzirwa zvako, uye kana odha yako iri diki, usatombo kunetseka, isu tine zvakajairika stock yezvinhu zvinopisa zvekutengesa. Tinogona kukupa mahara emahara kuti utarise mhando uye ruvara.
Hwindo Shutters Kudzima magetsi Mucheka 100
MagicalTex Blackout Roller Blinds Mucheka wakagadzirwa ne polyester. Yakanaka uye fashoni. Iine mbiri kumeso kunyorera nzira, zvigadzirwa zvedu zvine semi kudzima magetsi. Iine advanced ultrasonic yekucheka tekinoroji, inoita kuti iite burr kumucheto, yakanakisa kwazvo. Zvese zvigadzirwa zvedu zviri mune yakanaka mhando uye inonzwisisika mutengo. Jira redu harina humbowo hwemafuta uye harina mvura, zviri nyore kuchenesa, kuoma kana yangokwizwa